17 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-16T20:20:46+00:00 2020-01-17T00:00:56+00:00 0 Views
Endai munzvimbo dzakachengetedzwa. Musambozame henyu kufamba kana kutuhwina mumvura iri kuyerera.
Dzokerai kwamabva kana kushandisa imwe nzira. Musatendere vana kutambira mumvura.
Musaedze kunyurura anenge ayeredzwa.
Kana motokari ikadzimira pakati pemvura, isiye ipapo. Zviite nekuchimbidza, zviponese iwewe kwete zvinhu zvako.
Mirai kusvika maona kuti kwava kufambika nyore. Musaenda kunzvimbo kwaitika mafashamu. Kana chivakwa change chizere mvura, tarisai kuti makachengetedzeka here uye zvakanaka kuti musati mapindemo.
Ongororai madziro, magonhi, mahwindo nedenga kuti hazvikuwondomokerei here.
Rambidzai vana kutambira munzvimbo yaita mafashamu. — Susquenna Flood Forecast and Warning System.